Behoririka : tsy nifindra ireo mpivarotra | NewsMada
Behoririka : tsy nifindra ireo mpivarotra
Tsy nety nivarotra amin’ny toerana vaovao nametrahan’ny boriborintany fahatelo azy ireo mpivarotra amoron-dalana nesorina nanomboka teny amin’ny Shell Behoririka hatreo amin’ny tetezana Ambatomitsangana, omaly. 180 ny isan’izy ireo taorian’ny fanisana nataon’ny mpiasan’ny boriborintany fahatelo nefa 100 monja no zakan’ny toerana sady nihena ho 80 cm x70 cm ny anjara ho an’ny tsirairay. Ny zoma alina hifoha asabotsy, nisy namafa daholo ny marika napetraka hamaritana ny toerana ho an’ny mpivarotra. Ny faritra rahateo feno rano vokatry ny rotsak’orana ny faran’ny herinandro.
Vokany, niverina teny amoron-dalana indray ireo mpivarotra fa tsy nahafa-po ny toerana ao amin’ny lalankely nivarotan’ny mpivarotra kidoro « éponge » taloha. Ireto farany izay efa nafindra manamorona ny farin’i Behoririka manoloana ny fiangonana Foyer evangalique.
Ireo mpivarotra « sacoche » sy kitapo ihany sisa tafajanona manoloana ny EPP Behoririka satria nambaran’ny tomponandrakitra fa efa manaraka lamina.
Nilaza koa ny mpandamina avy ao amin’ny boriborintany fahatelo fa isaky ny alarobia ihany sisa afaka mivarotra fanaka ireo manao izany eo ambany tetezan’Ambatomitsangana. Hafindra toerana ihany koa ny fiantsonan’ny zotra E mandeha any Ambohimanhgakely atsy ho atsy hisorohana ny fitohanana lavareny miseho eo sy amin’ny manodidina.